एक २८ वर्षीया युवती, जसले १३० जनासँग यौन सम्बन्ध राखिन्! « Deshko News
एक २८ वर्षीया युवती, जसले १३० जनासँग यौन सम्बन्ध राखिन्!
मानिसले जीवनमा कति जनासँग यौन सम्बन्ध राख्छ होला। सामान्यतय एक वा बढीमा दश बाह्र। तर २८ वर्षकै उमेरमा आफूले १३० जनासँग यौन सम्बन्ध राखेको खुलासा एक युवतीले गरेकी छन्।
अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूले १३० जनासँग यौन सम्बन्ध राखिसकेको खुलासा ती युवतीले गरेकी हुन् । तर उनले यति धेरै पुरूषहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेका कारण मानसिक र शारीरिक रूपमा समेत क्षति भोग्नुपरेको बताएकी छन् ।
बेलायतकी २८ वर्षीया फ्रेंकी कोन्सिडिनले आज म कोसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दै छु भन्ने निश्चित भए मात्रै पनि आफ्नो मस्तिष्कले सामान्य रूपमा काम गर्ने गरेको बताएकी हुन् ।
वास्तवमा उनी गम्भीर स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेकी छन् । जुन रोग लागेकाहरूमा ‘सेक्स एडिक्सन’ का कारण पुरूषलाई जोडेर हेर्ने गर्छन् भने महिला पनि यस्तो रोगको शिकार बन्छन् । चिकित्सकहरूले ‘सेक्स एडिक्सन’ लाई ‘मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर’ का रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
फ्रेंकी यही रोगबाट पीडित छन् । टाइगर वुड्स, रसेल ब्रैंडजस्ता सेलिब्रेटीसमेत सेक्स एडिक्सनको शिकार भइरहेका छन् । सेक्स एडिक्सनको समस्याबाट पीडित मानिसहरूमा अन्य समस्याहरूसमेत हुन्छन् । उनी १३ वर्षको हुँदा बाबुआमाबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो ।